AMBILOBE - VOLY FANONDRANA : Mety tsara ao Beramanja ny voly kakaô nanoloana ny kafe
Herintaona no nanombohana ny voly kakaô tao Ankiabe sy Matiampako, Kaominina Beramanja, eto Ambilobe. Efa mitovy halava amin’ny olona iray ny hazo kakaô iray, amin’izao fotoana. 17 mars 2017
Sambany no nisy ny fambolena izany tany an-toerana kanefa mety tsara amin’ny toe-tany io voly fanondrana io. Miandry vokatra tsara ny mpamboly afaka dimy taona, fiakarana sy fisian’ny Cabosse.
Kakaô 800 fototra no ambolen’ireo tantsaha, noentina nanolo ny kafe novolen’ ny mponina teo aloha. “Tsy niova nandritra ny 50 taona ny voly kafe sy ny karazany nataonay. Tsy mampidi-bola firy ho an’ny tantsaha anefa ity fambolena farany ka aleon’izy ireo nanova izany. Antenaina hahitana tsena sy lalam-barotra tsara raha hiakatra ny vokatra any aoriana. Fambolena kakaô manara-penitra no ataonay ka antenaina hahazoana vokatra tsara”, hoy i Fatouma Zaravola, iray amin’ireo tantsaha 56 mpamboly izany ao Ankiabe.
Ny fandaharanasa fanohanana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra eto Madagasikara na Organisation de Soutien pour le Developpement Rural à Madagascar na Osdrm, tohanan’ny Fondation Aga Khan no nanohana ara-teknika ireo tantsaha tamin’ny fampidirina ity voly fanondrana ity ao Beramanja ity. Any Anaboranoifasy, Beramanja no tena mpamboly kakaô eto Ambilobe. Anisan’ny tanjona iray an’ny tetikasa Osdrm ny fanatsarana ny tsena ho an’ireo tantsaha.
Ny taona 2015 no nanomboka niasa teto Ambilobe ny Osdrm, araka ny fanazavana noentin’ny Mpandrindra Rezionaly ny Osdrm eto amin’ny Faritra Diana, Falitiana Tolojanahary Andriajanaka. Eto Ambilobe no foiben’ny birao rezionalin’ny Osdrm, Diana ahitana ny tetikasa koa ny Faritra Sofia, Analamanga sy Sava.
Fanaparitahana ny vomanga be otrikaina
Miompana amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fampihenana ny voka- dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’andro ny tetikasa. Ny fiarovana sy ny fanatsarana ny tany ary ny fanaparitahana ny teknikam-pambolena manaraka ny fenitra. Ambodibonara, Marivorahona, Ampondralava, Ambakirano sy Beramanja no Kaominina iasan’ny Osdrm eto Ambilobe. Efa miditra any amin’ny lemak’i Mahavavy ny tetikasa amin’ny fanatsarana ny voly vary ara-teknika. Ho an’ny fanatsarana ny tsenan’ny tantsaha, hanaparitaka ny fambolena lojy na “Black Eyes”, eto Ambilobe koa ny Osdrm. Toy ny any Port Berger azo aondrana koa ny lojy ary mety hampidi-bola tsara ho an’ny tantsaha.
Hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, mampitombo ireo zanaka na botirin’ny vomanga manana nofony volom-boasary haparitaka eto Ambilobe ny Osdrm. Be otrikaina misy Vitamina A sy C raha oharina amin’ireo vomanga efa fahita eto amintsika io karazana vomanga avy any ivelany io, araka ny nohazavain’ireo teknisianina ao amin’ny Osdrm. Miaraka amin’ny Biraom-paritry ny fanjarian-tsakafo na Office Régionale de la Nutrition ny tetikasa amin’ny fanaparitahana ny fambolena azy. Ilain’ireo vehivavy bevohoka sy mampinono ary ny zaza io vomanga io. Mandeha koa ny fanaparitahana sy ny fana- mafisana ny fambolena anamorongo sy finesse eto Ambilobe. Ny fambolena mantaly, bonarabe ho fiarovana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ilaina amin’ny voly kakaô koa ireo hazo ireo.
Ankoatra ireo asa isan-tsokajiny ataon’ny Osdrm, tetikasa lehibe heverina hanomboka amin’ity taona ity koa ny fanaparitahana ny Biogazy, fampiasana ny tain’omby ho lasa entona mety hanoloana ny saribao. Ny Vondrona Eropeanina no hiara-hiasa amin’ny Osdrm amin’izany. Mahazo tombony hatrany, araka izany, ireo mponina ambanivohitra eto Ambilobe amin’ireo tetikasa hanatsarana ny fambolena toy izao.